के सबै कुरा उतै बाट हुन्छ ? नेपालको हातमा केही छैन ? – tistung deurali
Posted in nepal, politics, south-asiaTagged baburam bhattarai conspiracy theory domestic politics foreign intervention india intelligence kp oli sushil koirala
← सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक ध्रुविकरण- मेटा विश्लेषण
एसिड प्रकरण बारे →
One thought on “के सबै कुरा उतै बाट हुन्छ ? नेपालको हातमा केही छैन ?”
बाबुरामलाई दनक दिन मात्र भए त ठिकै हो मित्र । नत्र भारतले १२ वूदे गराएर गणतन्त्र ल्याउंदा तपाई हाम्रो स्वाभिमान कता थियो, राष्ट्रवाद कहां थियो ?